sometimes – Zulu Translation – Keybot Dictionary
Keybot 13 Results 7 Domains
Izinhlelo zethu zahlukahlukene kakhulu, ngakho kwesinye isikhathi kungasebenza imibandela eyengeziwe noma izidingo zomkhiqizo (okubandakanya izidingo zobudala). Imibandela eyengeziwe iyotholakala Ezinhlelweni ezifanele kanti leyo mibandela eyengeziwe iba ingxenye yesivumelwane sakho nathi uma usebenzisa lezo Zinhlelo.
Sometimes the words on your screen may be too big or too small for you to read them comfortably. To change the size of the words on your browser, press and hold the [control] or [command] button on your keyboard and tap on the plus [+] or minus [-] key.
Ngaphambi kokuqala ukuhlola iwebhu, uzodinga ukusetha icebo ngomhlinzeki nge-intanethi. Umhlinzeki nge-intanethi yinkampani ekuvumela ukuthi ufinyelele i-intanethi namanye amasevisi ewebhu. Bahlinzeka ngezindlela ezahlukene zokuxhuma kufaka phakathi i-dial-up, ikhebuli, ama-fiber optic noma i-Wi-Fi. Lolo xhumo lunquma isivinini sokufinyelela kwakho ku-intanethi.
Njengoba uya elabhulali ‘ukuyohlola’ amabhuku, ungathola noma uhlole amakhasi ku-intanethi usebenzisa isiphequluli sewebhu. Isiphequluli uhlobo lwesofthiwe kukhompyutha yakho elikuvumela ukuthi ufinyelele ku-intanethi. Isiphequluli sisebenza njengewindi elikubonisa amawebhusayithi ahlukahlukene lapho kukhona khona ulwazi. Okufanele ukwenze ukuthayipha ikheli lewebhu esipheqululini sakho futhi uyiswa ngokushesha kuleyo webhusayithi.